ပန်ကရိယကင်ဆာ(မုန့်ချိုအိတ်ကင်ဆာ) - Hello Sayarwon - Page 1 of 0
ပန်ကရိယကင်ဆာ(မုန့်ချိုအိတ်ကင်ဆာ)ရဲ့ အစောပိုင်းလက္ခဏာများ၊ ကုထုံးများ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်နည်းများနှင့် လိုက်နာရမယ့် နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံများကို ဒီကဏ္ဍမှာ လေ့လာလို့ ရပါတယ်။
အသက် (၅၀) ကျော်လာရင် ဒီရောဂါတွေ ဂရုစိုက်ဖို့လိုမယ်နော်
လေ့လာမှုတွေအရ အသက် ၅၀ ကျော်လူကြီး ၁၀ ယောက်မှာ ၁ ယောက်က နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုရှိနေပြီး ၁၀ ယောက်မှာ ၂ ယောက်ကတော့ ရောဂါတစ်ခုထက်ပိုရှိနေတာကို တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ အသက် ၅၀ ကျော်လူကြီးတွေ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါ ၁၀ မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁. သွေးတိုးရောဂါ အသက်ကြီးလာရင် ခန္ဓာကိုယ်ကအစိတ်အပိုင်းအားလုံးနည်းတူ သွေးကြောနံရံတွေလည်း အားနည်းလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တလျှောက် သွေးသယ်ဆောင်တဲ့အခါ သွေးကြောနံရံတွေမှာ ဖိအားပိုလာပြီး အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါကို ဂရုမစိုက်ရင် ဒါမှမဟုတ် ရောဂါရှိမှန်းမသိခဲ့ရင် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ တပုံကြီးလိုက်လာမှာမို့ မပေါ့ဆပါနဲ့နော်။ ၂. ဆီးချိုရောဂါ နောက်ပိုင်းလူနေမှုပုံစံအရကော စားသောက်မှုပုံစံအပြောင်းအလဲကြောင့်ပါ အရင်ကထက် ဆီးချိုရောဂါဖြစ်တဲ့သူတွေ အရမ်းများလာတာအားလုံးအသိပါပဲ။ ဆီးချိုရောဂါဟာ နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သလို သေချာကုသမှုမခံယူခဲ့ရင် နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါကနေ […]